Wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo la kulmay maamulayaasha dugsiyada dowladda - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG) Wasiirka wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulahi Goodax Barre ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula la qaatay, maamulada, guddoomiyeyaasha iyo kormeerayaal ka tirsan dugsiyada ay maamusho dowladda ee ku yaalla gobolka Banaadir.
Madaxda wasaaradda iyo xubnaha ka socday dugsiyada ay maamusho dowladda federaalka ayaa ka wada hadlay tayeenta waxbarashada iyo in si wada jir ah loo xaliyo caqabadaha jira.
Kulanka waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada, Feysal Cumar Guuleed, wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada, Cabdiraxmaan Maxamuud Guuleed, agaasimaha guud ee wasaaradda, Xassan Maxamed Cali iyo xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Axmed Xassan Yuusuf.
Maamulaha dugsiga hoose, dhexe sare ee Hanti wadaag Yaxye Faarax Jaamac oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in wasiirka waxbarashada iyo xubnaha kale ee wasaaradda ay kala hadleen sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ku hor gudban asaga oo sheegay in la isku raacay in wadajir loo raadiyo xal.
Mudane Cabdulahi Goodax, wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii loo tayeyn lahaa aqoonta macalimiinta, si kor loogu qaado garaadka carruurta Soomaaliyeed.
“Wasaaradda waxbarashada waxay dadaal ugu jirta sidii loo tayeen lahaa, macalinta si kor loogu qaado garaadka caruurta Soomaaliyeed, idinka waxaa la idinka rabaa inaad ka soo baxdaan waajibaadka idin saaran” ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya.
Wasiir Goodax ayaa sidoo kale sheegay in dayactir lagu sameyn doono dugsiyada dowladda si loo horumariyo waxbarashada dalka.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta macalimiinta waax ka dhiga dugsiyada ay gacanta ku heyso dowladda, si loo horumariyo waxbarashada, iyadoo dhawaan magaalada Muqdisho tababar loogu soo gaba gabeeyay 100 macalin oo wax ka dhiga dugsiyada ku yaalla gobolka Banaadir.
Darjiinka nambar afar oo lagu wareejiyay maamulka gobolka Banaadir